Thomas Tuchel oo codsaday heshiis weyn oo dhanka weerarka ah – Gool FM
Thomas Tuchel oo codsaday heshiis weyn oo dhanka weerarka ah
(London) 28 Jan 2021. Tababaraha kooxda Chelsea ee Thomas Tuchel ayaa go’aamiyay bar-tilmaameedkiisa ugu horeeya ee suuqa kala iibsiga, si uu ugu taageero kooxdiisa heshiis weyn oo dhanka weerarka ah xilli ciyaareedka dambe.
Tuchel ayaa loo magacaabay Talaadadii inuu noqdo tababaraha kooxda London, isagoo bedelay Frank Lampard, kaasoo shaqada looga ceyriyay natiijo xumi darteed.
Wargeyska “Daily Mail” ee dalka England ayaa soo wariyay in weeraryahanka reer Norway iyo kooxda Borussia Dortmund ee Erling Haaland, uu noqday bar-tilmaameedka ugu horeeya ee tababaraha reer Germany inta lagu gudi jiro suuqa xagaaga ee soo aadan.
Wararka ayaa waxay intaas ku sii darayaan in maamulka kooxda Chelsea ay u diyaarinayaan 100 milyan, si ay ugu soo xero galiyaan weeraryahanka kooxda Borussia Dortmund ee Erling Haaland fursada ugu horeysa.
Erling Haaland ayaa kula jira kooxda Borussia Dortmund heshiis waqti dheer, laakiin heshiiska waxaa qeyb ka ah qodob u ogolaanaya inuu boxo xagaaga 2022.